Saynab Faarax: ''Aniga iyo ninkayguba waxaan qabnaa HIV Aids, ninkaygii horana isla cudurkan ayuu u dhintay'' | Radio Hormuud
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay 1 December oo ah maalinta loo asteeyay xanuunka dilaaga ah ee HIV Aids ayaan wali la garaneyn tirada rasmiga ah ee dadka Soomaaliyeed ee cudurkaasi uu hayo. Adduunka oo dhan waxa la ogyahay in firuska HIV ay la nool yihiin dad lagu Sheegay 37.9 milyan oo qof.
Haddaba Saynab Faarax iyo ninkeeduba oo ku nool mgaalada Muqdisho waxa ay sanado badan la noolaayeen fayruska HIV Aids iyagoo ku dhex jira bulsho muxaafid ah oo u arka cudurka iyo dadka uu ku dhacaba dad xun, inkastoo waayadii dambe fikradahaasi wax iska badaleen haddana wali dadka sida firuska HIV kuma dhiiradaan inay bulshada la wadaagaan xannuunka haya.
Saynab oo warantay weriyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamad Aadan ayaa sheegtay iney iyada iyo seeygeedaba ay la nooliyihiin cudurka HIV Aids balse caruurtooda aysan qabin cudurkan taasina ay sabab u tahay dawada ay qaataan.
''Aniga iyo ninkeyguba waan qabnaa cududurkan, waxaana sidoo kale horay ugu dhintay HIV Aids ninkeygii hore'', ayay tiri Saynab.
''Dhawr iyo toban sano ayaa la noolahay cudurkan waxaana bulshada kala kulmaa faquuq badan balse waxaa iigu darnaa xilliyadii abaaraha anagoo raashin qeybsaneyno nala tuuryeeyay inagoo dhawr ah oo la nool cudurkan''. Waxaa nalagu yiri ka baxa meesha ha nagu soo neefsanine, cudurka HIV Aids neef laguma kala qaado'',
Dadka xanuunkan la noolse waxa ay ku doodayaan in cudurkan uu ku iman karo sababo badan oo ay ka mid tahay qadar Alle, dadkuna ay tahay inay fahmaan in xanuunkan lala noolaan karo.